Samsung Exynos 5100, modemkii ugu horreeyay ee 5G ee taleefannada | Androidsis
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday modemkii ugu horreeyay ee 5G ee taleefannada. Tani waxay ku hoos imaaneysaa magaca Exynos 5100, waxayna awood u leedahay inay na siiso si aan caadi aheyn oo deg deg ah oo aan u soo dejino xawaare aan hadda ka heli karin xitaa moobilka ugu qaalisan uguna horumarsan suuqa.
Iyadoo shirkadda weyn ee Kuuriyada Koofureed ayaa horey u soo bandhigtay tikniyoolajiyadan kahor, weli diyaar ma ahayn. Laakiin hadda waa rasmi in Samsung ay leedahay 5G chip oo diyaar u ah in lagu dhex daro mobilada 5G ee imaan doona sanadka soo socda, iyo ka hor Qualcomm, oo ah kooxda ugu weyn ee qaybtan.
Qalabkan yar, oo lagu dhajiyay habka wax soo saarka 10nm, wuxuu siinayaa isku xirnaan taageero buuxda dhammaan shabakadaha 5G iyadoo la waafajinayo heerarka iyo isdabajoogga buuxa ee Siidaynta 3GPP 15. Isla mar ahaantaana, waa la jaan qaada dhammaan tiknoolajiyaddii hore, sida 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA iyo 4G LTE.
Samsung waxay faahfaahin ka bixineysaa in modemka cusub uu gaari karo xawaare hoos udhac ah oo gaaraya 2GB / s oo loogu talagalay mowjadaha ka hooseeya 6GHz, iyo xawaare hoos udhig ah oo gaaraya 6GB / s oo loogu talagalay mmWave spectrum. Xawaareyadan ayaa ka dhigaya modemkan illaa 5 jeer ka dhakhso badan 4G. Intaa waxaa dheer, isku xirnaanta 4G ee Samsung Exynos 5100 cusub ayaa sidoo kale la hagaajiyay oo hadda waxay gaari kartaa xawaare hoos udhac ah oo gaaraya ilaa 1.6GB / s, oo lid ku ah 1.2GB / s oo badanaa lagu gaaro modemyada aan ka helno suuqa. .
Exynos 5100 ayaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa sanadkan gudihiisa, sidaa darteed waa inaan aragnaa iyadoo ka muuqata qaar ka mid ah boosteejooyinka bilaha ugu horreeya ee 2019. Marka lagu daro taleefannada casriga ah, waxaa jiri doona aalado kale oo badan oo inta badan la isticmaalo oo yeelan doona qalabkan.
Nasiib darrose, sida uu sheegay agaasimaha shirkadda Samsung Electronics, Galaxy S10 kuma faani doono Exynos 5100 modem, maadaama aysan noqon doonin taleefanka gacanta 5G, in kasta oo ay u badan tahay in shirkaddu ay soo saarayso taleefan casri ah teknolojiyaddan sannadka soo socda sida noocyo kale oo badan ay yeelandoonaan, Samsungna laguma aqoon in laga tagay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung ayaa ku dhawaaqday Exynos 5100, oo ah modemkii ugu horreeyay adduunka ee 5G ee taleefannada
Nokia waxaa laga yaabaa inay ku shaqeyso sameecad ku hadla caqli badan